LUSUKA EKHASINI-1 | News24
LAST UPDATED: 2020-03-30, 09:27
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaAbafundi baphuma kungakashayi isikhathi ngenhla yokungabikhona kwamanzi.
KUPHAZAMISEKE ukufunda esikoleni samabanga aphakeme i-Georgetown kulandela ukungabi khona kwamanzi kulesi sikole seloku kuvulwe izikole ngesonto eledlule.
Lokhu kuza ngemuva kokuba uMasipala uMsunduzi uvale amanzi kulesi sikole ngoba uthi sikweleta imali engu-R2 million.
Seloku kwaqala ukuvula othisha ngoMsombuluko owedlule mhla zili-13 kuMasingana (January) amanzi abengekho kulesi sikole. Abafundi bona bakhishwa ngehora lesi-11am kusukela ngoLwesithathu kwaze kwaba uMsombululo.
NgoLwesibili bakhishwe ngo-8.30am bayiswa emakhaya base betshelwa ukuthi babuyele esikoleni namhlanje (ngoLwesine) ngenxa yokungabikho kwamanzi.
Izindlu zangasese azisebenzi kanti lokho besekuphoqa ukuba abafundi ikakhulukazi abesifazane bayozikhulula ezikhotheni ngaphandle kwesikole. Abanye babafundi abakhulume ne-Echo kodwa bangathanda uuthi kudalulwe amagama abo bathe bakhathazekile ngokwenzeka esikoleni ngoba kunomthelela omubi ezifundweni zabo.
“Seolku thina sivulile asifundi kahle ngenxa yaokuthi amanzi awekho. Ezinye izingane kwezinye izikole ziyaqhubeka ziyafunda kodwa thina sigoduka kungashayai nesikhathi sokuhamba. Siyesaba ukuthi sizosalela emuva nezifundo zethu siyafisa nje ukuthi le nkinga ilungiswe maduzane,” kusho omunye wabafundi bakulesi sikle ongathandanga ukudalulwa.
Omunye umfundi kamatikuletsheni uthe Bona bashayeke kakhulu ngoba kumele engabe sebe qalile vele ukufunda ngezikhathi zantambama kodwa abakwazi ukukwenza loko ngenxa yenkinga yamanzi.
“Kuzothi uma ngabe sekulungisiwe thina sizobe sesinomsebenzi omningi osihlalele nokuzobe sekuba umthwalo omkhulu kuthina njengabafundi.
“Asijabulile neze nje ngento eyenzeka la esikoleni ngoba nokuthi sihambe siyozikhulula ngaphandle ezikhotheni akuphephile kuzokwenziwa njani uma ngabe kukhona umuntu ovele akubambe akudlwengule kade kwaziwa ukuthi usesikoleni ?,kubeka yena.
Abafundi bakhala nangokuthi nakuba othisha bezama ukuthi bafundise ngezikhathi zasekuseni ngaphambi kokuba bagoduke , kunziam ukuthi kufundeke njengoba iphuma eliphuma ezindlini zangasese lingabekezeleleki.
Laba bafundi bathi seloku kuvulwe izikole bafunda izifundo ezine kuphela ngosuku, esikhundleni sokuthi bafunde izifundo eziyisithupha.
Isekela Sihlalo wesigungu esimele abafundi kulesi sikole uMnu Sonani Ndimande uthe ukungabikhon akwamanzi ikona okubaphoqe ukuba izingane zisheshe zikhishwe esikoleni.
Uthe nabo bakhazekile ngokuphazamiseka kokufunda kulesi sikole kodwa yikho into ababezoyenza.
“Isikole sonke siyanuka nelanga liyashisa ngeke uze uthi ziingane azihlale esikoleni amanzi engekho uma ngabe seziquleka kuzokwenziwa njani? Besinethemba lokuthi umnyango wezemfundo uzoyilungisa ngokushesha kodwa akwenzekanga,” kubeka yena.
“Sikhathazekile ukuthi isikole singakweleta imali enkulu kangaka. Lena into ngempela ekumele siyidingide ngoba indlela umasipala ocharger njgayo kumele idingidwe kanjalo nengqalasizinda nayo kumele kuhlolwe ukwenza isiqiniseko sokuthi akukho yini ukuvuza kwamanzi okukhona kamasipala.
Ngokwesitatimende esikhiswe ibamba lokhulumela umasipala uMsunduzi uNks Ntobeko Ngcobo, umasiplala ukuqinisekisile ukuthi ngempela isikole sikweleta imali engu-R2 million nokuthi umasipala uwavalile amanzi kulesi sikole.
Sithe umasipala ubuloku uzama ukuxoxisana nesikole ukuthi size phambili senze izinhlelo zokuthi sizokhokha kanjani.
Incwadi yokugcina eya thunyelwa kulesi sikole bekuyinyanga kaLwezi ( November) kodwa isikole asizange size siphendule.
“ IMeya uKhansela Mzimkhulu Thebolla ubambe izingxoxo noMphathiswa wezemfundo, kweziwe izinhlelo mayelana nesikweleti kwabe sekuvunyelwana ngokuthi amanzi azovulwa esikoleni,” kufunda isitatimende.
IMeya uMnu Thebolla uthe bebengaqondile ukuphazamisa ukufunda kwezingane. Uthe bebenethemba lokuthi isikole sizoza kubona kweziwe izinhlelo zokuthi sizokhokha kanjani kodwa sizanga.
LIVE | Coronavirus lockdown works, says Ramaphosa and SA records second death
Delft 09:24 AM